पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन... :: ज्योति देवकोटा :: Setopati
पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन पर्थमा
हेमन्त काफ्ले सिड्नी, भदौ १७
विश्वब्यापी रूपमा हरेक २ वर्षमा आयोजना हुँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मेलन यस पटक अष्ट्रेलियाको पर्थमा आयोजना हुँदैछ।
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) को आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलन आउँदो सेप्टेम्बर ९ र १० तारिखमा पर्थस्थित म्यासोडेनियन सेन्टरमा हुँदैछ। पाँचौ पटक हुन लागेको साहित्य सम्मेलनका दौरान अनेसासको कार्यदिशा तथा नेपाली भाषालाई बिश्वब्यापीकरण गर्ने बारे छलफल गरिने छ।
सम्मेलनलाई अनेसास केन्द्रीय समितीसँगको सम्योजनमा अनेसास पर्थ च्याप्टरले आयोजना गर्न लागेको हो।
बरिष्ठ कवि/ साहित्यकार तुलशी दिवशको प्रमुख आतिथ्यमा हुन लागेको यो सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालबाट प्रा. डा. सन्जिव उप्रेती, डा. लक्ष्मण प्रसाद गौतम, राधेश्याम लेकाली, एल बि क्षेत्री, युवराज नयाँघरे लगायत दर्जन साहित्यकारहरु अष्ट्रेलिया आउँदै छन्।
त्यस्तै अमेरिकाबाट केन्द्रीय अध्यक्ष पदम बिश्वकर्मा, संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुबेदी लगायतका थुप्रै बरिष्ठ साहित्यकारहरुको समूह आउँदो साता अष्ट्रेलिया आउने कार्यक्रम छ।
सम्मेलनमा जापान, कोरिया, कतार, इन्डिया, बेलायत, जर्मन, बेल्जियम, डेन्मार्क, मलेशिया लगायत अन्य थुप्रै देशका साहित्यकारहरुले पनि सहभागिता जनाउने अनेसासका केन्द्रिय सचिब तथा पर्थ च्याप्टर संयोजक गणेश घिमिरेले बताए।
घिमिरेका अनुसार पाँचौ विश्व सम्मेलनलाई सफल बनाउन एनआरएनएका आइसिसी उपाध्यक्ष भवन भट्ट पनि आउँदो साता पर्थ आउने कार्यक्रम छ। एनआरएनले पनि प्रवास साहित्यलाई माया गर्न थालेको छ।
भट्ट सोही योजना बमोजिम कार्यक्रममा सहभागी बन्न लागेका हुन्। यस्तै एनआरएनका ग्लोबल युवा संयोजक विजय पोखरेल पनी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्।
यता अष्ट्रेलियाको सिड्नी, मेल्बर्न, ब्रिजबेनबाट पनि थुप्रै साहित्यकारकारले सम्मेलनमा सहभागी जनाउनेछन्।
सम्मेलनमा बिशेष कार्यपत्रहरु प्रस्तुति, छलफल गरिनुका साथै बिभिन्न साहित्यकर्मीहरुलाई सम्मान प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको अनेसासका केन्द्रीय अध्यक्ष पदम विश्वकर्माले बताए। नेपालबाट "बर्तमान नेपाली साहित्यको मुलप्रवाहमा डायस्पोरा साहित्य" बिषयकमा प्रा डा लक्ष्मण प्रसाद गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन्।
अष्ट्रेलियाबाट सानु घिमिरेले एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै यो बर्षको 'अनेसास राम लामा सर्बोत्कृट पुरस्कार' सम्मेलनका दौरान संस्थापक अध्यक्ष होमनाथ सुबेदीलाई प्रदान गरिने कार्यक्रम समेत रहेको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताए।
सम्मेलनमा बिशेषत: अनेसास र यसको कार्यदिशाबारे छलफल गरिने कार्यक्रम रहेको कार्यक्रमका संयोजक गणेश घिमिरेले बताए। साथै नेपाली भाषालाई कसरी बिश्वव्यापीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारे पनि सम्मेलनका दौरान छलफल गरिने घिमिरेले जनाए।
सम्मेलनका दौरान पर्थबाट प्रकाशित दुई पुस्तकहरु "यादहरुको पहाड" र "जलीरहेको एउटा देश" सहित अन्य साहित्यकारहरुका कृतिहरु लोकार्पण गरिदै छ।
नेपाली साहित्यको विश्वब्यापिकरणको यो अभियानमा संसारभरका साहित्यकर्मीहरुको उपस्थितिले नेपाली भाषा, साहित्य र वाङ्मयको उचित सरक्षण र प्रबर्दनमा बिशेष टेवा पुग्नेमा विश्वस्त रहेको पर्थ च्याप्टरका उपाध्यक्ष निरज क्षत्रीले बताए।
झन्डै २५ वर्षे इतिहास बोकेको अनेसास, आजको दिनसम्म विश्वका ४० भन्दा बढी देशमा ८४ भन्दा बढी शाखाहरु बिस्तार गर्न सफल छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ १७, २०७४, १०:२६:५८